Marnaba waligaa alaabtaada ha ku lumin Tile iyo raad raacyaasheeda | Wararka IPhone
Marnaba waligaa alaabtaada ha ku lumin Tile iyo raad raacyaasheeda
Tile wuxuu soosaaraayay qalab raadin muddo sanado ah si loogu dhigo shey kasta oo markaa awood ugu yeesho inuu si fudud uga helo agabkeenna moobiilka. Iyada oo sannado badan oo waayo-aragnimo ah, waxay billowday alaabooyin cusub oo ballaadhinaya buuggeeda waxayna cusbooneysiisay kuwa jira, iyadoo la wanaajinayo waxqabadkooda.. Waxaan awoodnay inaan tijaabinno labo kamid ah: Tile Pro, oo ku haboon furayaasha, boorsooyinka ama boorsooyinka dhabarka: Tile Sticker, aalladda adkeysiga leh oo lagu dhejin karo dusha sare.
1 Tile Pro, cusbooneysiinta qadiimiga ah
2 Calaamadaha Tile
4 Adeeg Lacag Bixin Leh
Tile Pro, cusbooneysiinta qadiimiga ah
Qof kasta oo yaqaan Tile waa hubaal inuu si dhakhso leh u aqoonsado aaladdan astaamaha. Waa nooca cusub ee soo jireenka ah ee ku soo hagaagaya dhinacyo aad muhiim u ah. Qaabkeeda laba jibbaaran oo leh daloolka geeska wuxuu ka dhigayaa mid ku habboon in lagu dhejiyo giraan muhiim ah, ama lagu dhejiyo boorso ama shandad. Cabirkiisu waa sida kan keychain, sidaa darteed wuu iskaga gudbi karaa isaga oo aan qofna si kale u arkin.. Waxaa lagu heli karaa laba midab, cawl madow iyo caddaan, waxayna badhtanka ku leedahay badhan loo isticmaalo isku xidhka iyaga iyo shaqooyinka kale ee aan dib ka sheegi doono.
Qalabkan yar ayaa gudaha ku xiraya tiknoolajiyad fara badan. Waxa ugu horeeya, oo ka duwan kuwa kale, waa in la helaa batteri la beddeli karo (1 sano oo ismaamul ah), batari CR2032 ah oo ku hoos qarsoon dabool yar oo laga saari karo gadaashiisa Tile Pro, wuxuu kaloo leeyahay badhan xaruntiisa qayb, afhayeen iyo gudaha anteeno Bluetooth ah iyo kordhiye ku siinaya wax u dhigma ilaa 122 mitir, wax gebi ahaanba bahalnimo leh. Waa qalabka leh midka ugu dheer ugudubka Tile, iyo sidoo kale kan leh kan ugu awooda badan kuhadalka, oo leh cod kuu ogolaanaya inaad kaheli karto shey kasta oo gurigaaga kujira xitaa hadii ay kujirto geeska ugu dambeeya ee boorsadaada. Waa biyuhu inkasta oo aan la quusin karin.
Waa Tile oo dhan-wareegsan, aalad ficil ahaan aan la burburin karin oo aad ku dhegi karto dusha sare, oo waliba aad u adag in la kala saaro marka la dhejiyo. Istiiikarkaani runti wuu yaryahay, sida lacagta shilinka € 1, in kasta oo uu ka sii dhumuc weyn yahay. Waxaa lagu heli karaa midab madow, waa qalab aad u caqli badan oo gebi ahaanba aan laga warqabin iyo inaad ku dhegi karto aaladda hagta, qalabka elektarooniga ah, mootada korontada, iwm Shay noocee ah oo aadan rabin inaad u lumiso adduunka? Hagaag, waa hubaal inaad ku dhejin kartid Tile Sticker-ka dushiisa.
Teknoolojiyada lagu soo daray qalabkan waxay aad ugu egtahay tan Tile Pro, in kastoo xoogaa kaladuwanaansho ah. Midka hore ayaa ah in batteriga aan la beddeli karin, marka ismaamul dhan 3 sano ah, markii batterigu dhammaado waa inaad mid kale iibsataa. Intaas waxaa sii dheer, kala duwanaanshihiisu wuu ka yar yahay, in kastoo uu gaarayo 46 mitir, sidoo kale qofka ku hadla ayaa ka itaal yar. Beddelka waxaan leenahay cabir aad u yar oo waliba u adkaysta biyaha, xitaa quusin. Waxaas oo dhan marka lagu daro, waxay aad ugu adkaysataa naxdinta iyo dhicitaanka., iyo sidii aan horay u sheegay, way adag tahay in laga saaro mar haddii ay ku dhagan tahay dusha sare.
Qalabkan 'Tile' wuxuu u baahan yahay taleefannadeenna casriga ah si ay u shaqeeyaan, tanna waxay u leeyihiin codsi loogu talagalay macruufka (isku xirka) kaas oo la jaan qaadaya iPhone, iPad iyo Apple Watch, iyo Google Play (isku xirka) kaas oo aan uga faa'iideysan karno. Dhexdeeda waxaan ku arki doonnaa dhammaan aaladaha aan ku xirnay akoonkeenna, iyadoo ay suurtagal tahay in lala wadaago isticmaaleyaasha kale si ay iyaguna u adeegsadaan, ka hel iyaga khariidada oo aan aragno taariikhda goobaha, si aan u raacno tallaabooyinkeenna oo raadso qalabkii lumay.
Haddii aan waynay Tile-keena oo ay ku dhexjiraan iPhone-keena, waxaan arki karnaa inta ay le'eg tahay radar ka buuxsamaya cagaar sida ugu dhow ee aan ugu dhow nahay. Waxaan sidoo kale ka dhigi karnaa cod si aan si fudud ugu helno. Haddii ay dhacdo in aanan ku haysan meel u dhow iPhone-keena, Waxaan awood u yeelan doonnaa inaan adeegsanno taariikhihii goobaha, u calaamadinno inay lumeen iyo in dadka kale ee Tile isticmaalaya ay naga caawinayaan inaan helno, Maaddaama haddii isticmaale kale oo Tile ah uu yimaado meel u dhow qalabkeenna, meesha ay ku yaalaan khariidadda waa la cusbooneysiin doonaa waxaana awoodi doonnaa inaan ku isticmaalno tabka bulshada dhexdeeda barnaamijka si aan u helno.
Marka lagu daro helitaanka aaladdayada, codsiga Tile iyo badhanka dhexe ee qalabkiisa waxay leeyihiin shaqo xiiso leh oo kuu oggolaaneysa inaad hesho taleefankaaga. Ka sokow taasi waxay ka muuqan doontaa khariidada sida haddii ay tahay aalad kale oo Tile ah, waxaad ka dhigi kartaa cod adigoo riixaya badhanka dhexe ee mid ka mid ah qalabka Tile-ka laba jeer, kaas oo ciyaari doona laxan cod dheer oo ku filan si loo helo iPhone-kaaga. Xitaa wuu dhawaaqayaa hadaad aamusnaan ku hayso.
Adeeg Lacag Bixin Leh
Isticmaalka howlaha Tile gabi ahaanba waa bilaash, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad iska diiwaangeliso arjiga iyadoon wax lacag ah bixin, kaliya adigoo soo iibsaday alaabada Tile. Laakiin Waxaa naloo fidiyay adeeg mudnaan leh oo leh shaqooyin dheeri ah bixinta of 3,49 bishiiba oo noqda € 2,92 haddii aad doorato bixinta sanadlaha ah. Waxaad isku dayi kartaa adeeggaas caymiska si aad u aragto haddii aad xiiseyneyso. Adeegyada dheeraadka ah ee ay ku jirto ee la xiriira adeegga bilaashka ah waa:
Digniinta Smart: haddii aad ka guurto qalabkaaga ay ku calaamadeysan tahay Tile waxaa isla markiiba lagugu wargelin doonaa iPhone-kaaga
Beddelka bateriga bilaashka ah ee Tile Pro iyo Mate
Taariikhda goobta illaa 30 maalmood
Dammaanadda dusha sare ee illaa 3 sano
Suurtagalnimada inaad la wadaagto asxaab badan inta qoyska aad rabto
Adeegga farriinta qoraalka
Tile wuxuu na siiyaa xalal kala duwan si aan markasta awood ugu yeelano inaan helno walxahaas aanan doonaynin inaan luminno. Iyadoo la adeegsanayo naqshad aad u xeel dheer, hoos-u-dhigis la yaab leh iyo barnaamij aad u wanaagsan oo loogu talagalay macruufka, oo leh maarayn aad u macquul ah, waxay ku guuleysataa waxa sumad kale aysan ku guuleysan xilligan, iyo waxay xallisaa xaddidaadda kala duwanaanta Bluetooth iyada oo ay ugu wacan tahay shabakad ay abuureen bulshada adeegsadahooda. Runtii waa la mahadiyey in ikhtiyaaraadka koontada bilaashka ah ay dhameystiran yihiin, ikhtiyaarka Premium u beddelayo wax aan muhiim ahayn, iyo sidoo kale inay leedahay qiime la awoodi karo. Waxaan ka heli karnaa Tile Pro € 34,99 (isku xirka) ama xirmo labo cutub ah € 59,99 (isku xirka). Tile Sticker waxaa lagu qiimeeyaa € 39,99 xirmo laba cutub ah (isku xirka).
Tile Pro iyo warqad yar
Naqshadeynta Minimalist iyo iska caabin
Kala duwanaansho aad u wanaagsan
Codsi aad u wanaagsan
Shabakada isticmaalayaasha kaa caawinaya inaad hesho
Tile Sticker oo leh batari aan la beddeli karin
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Marnaba waligaa alaabtaada ha ku lumin Tile iyo raad raacyaasheeda
Hadda waxaad ku isticmaali kartaa Kaaliyaha Google dadka ku hadla Sonos
Apple ayaa sii deysay filimka Hala, oo ah filimkii ugu horreeyay ee Apple TV + ah